Raw Nandrolone laurate poda Vagadziri & Vanotengesa - Fakita
Nandrolone laurate powder (BAN) (mazita emagetsi Clinibolin, Fortadex, Laurabolin), kana nandrolone dodecanoate powder, inozivikanwawo se19-nortestosterone 17β-laurate, inonzi synthetic androgen uye anabolic steroid uye nandrolone ester. Sezvakaita nandrolone injectable, ichi chinodhaka chinopa anogadzirisa zvakasimba anabolic effect.
Raw Nandrolone Laurate powder (26490-31-3) video
Raw Nandrolone Laurate powder tsananguro
Nandrolone Laureate isiri yekemikari zita rekugadzirisa zvinoshandiswa muLaurabolin.nandrolone laureate injairo yezvokudya zvechirwere steroid ine mishonga inodhaka Raw Nandrolone Laurate powder. Laurabolin anonyanya kushanda achitora Deca Durabolin (nandrolone decanoate), achigara achishanda kusvikira mwedzi mumuviri. Kana uine matambudziko pakuwana chimiro che testosterone chaiyo mushure mekushandisa Deca, iwe zvechokwadi uchava nezvinetso kushandisa Laurabolin.
Vatambi vechikoro asi zvakadaro vanowanzovhiringidza ichi chemishonga pavhiki nevhiki. Kuva nandrolone, Laurabolin acharatidza kuonekwa kwevanabolic nemigumisiro ine simba uyerogenic madhara.
Laurabolin ane simba yakasimba anabolic ine minimum androgenic uye yakanyatsogadzirirwa kukurudzira Protein Synthesis pasina kubudiswa kwezvinhu zvisingadi (kurutivi). Iyi proteiniti yemagetsi inobvumira kudzivirira mapuroteni kurasikirwa kuburikidza neUrea uye kunokurudzira mavara ane chiuno. Mune mhuka chigadzirwa ichi chakashandiswawo kugadzirisa kukanganisa kwemagetsi, kusagadzikana, anemia uye kunonoka kusimwa.
Raw Nandrolone Laurate powder Specifications
Product Name Raw Nandrolone Laurate powder
Kemikari Name Raw Nandrolone Laurate powder; 26490-31-3; Nandrolone dodecanoate; UNII-WVJ22FFN83
muchiso Name Clinibolin, Fortadex, Laurabolin
CAS Number 26490-31-3
Molecular Wsere 456.711 g / mol
Kunyorera Point 44-46 ° C
Boiling Point 559.78 ° C pa 760 mmHg
ruvara Yakachena kana kuti yakachena chena cristalline powder
APane Raw Nandrolone Laurate powder ndiro zita remakemikari yemishonga inoshanda muLaurabolin. Pharmaceutical material, muscle growth steroids. Semhomoni yehomoni uye vana hormones. Raw Nandrolone Laurate powder ine yakasimba anabolic action ne minimum androgenic uye yakanyatsogadzirirwa kukurudzira Protein Synthesis pasina kubudiswa kwezvinhu zvisina kunaka.
Chii chinonzi Raw Nandrolone Laurate powder (26490-31-3)?
Nandrolone laurate powder inomutambo inokonzerwa neanabolic steroid nandrolone. I-esur laurate inoshandiswa pano iviri maatomu eakubhi kwenguva refu kudarika decanoate, uye nekuda kweizvi iyo mhizha inoumba zvishoma kwenguva refu-drug drug deposit kumativi ejojo ​​kune Deca-Durabolin. Zvichipa simba rakanonoka-kusunungurwa kwezvinhu, zvinokwanisika kutonga nandrolone laurate powder kamwe kamwe kwemavhiki matatu kusvika mana mune zvekurapa. Sezvakaita nandrolone injectable, ichi chinodhaka chinopa anogadzirisa zvakasimba anabolic effect, iyo inofambidzana nehuwandu hwemaestrogenic uye androgenic. Kunyange zvazvo isingawanzoshandiswa zvakanyanya, nandrolone laurate powder inofarirwa nevatambi uye bodybuilders nokuda kwekukwanisa kwayo kukurudzira kugadzikana kunowedzera zvishoma muhutonda hwakaonda uye zvisingabatsiri.
Iyo yakakura sei Nandrolone Laurate powder (26490-31-3) mabasa
Nandrolone laurate powder is form modified of nandrolone, iyo carboxylic acid ester (lauric acid) yakabatanidzwa ne17-beta hydroxyl. Esterified steroids haisi polar kupfuura steroid, uye inowedzera zvishoma nezvishoma kubva munzvimbo yejojo. Rimwechete muropa, ester inobviswa kuti ibudise pachena (inoshanda) nandrolone. Esterified steroids yakagadzirirwa kuti iwedzere hwindo rehutano hunotevera hutungamiri, zvichibvumira kuti purojekiti isinganyanyi kuenzaniswa yakaenzaniswa nemajojo ezvisingabhadharwa (asina kutenderwa) steroid. Nandrolone laurate powder yakagadzirirwa kupa hurumende kusunungurwa kweNandrolone kusvika ku3 kusvika kumavhiki 4 mushure mejova.
Raw Nandrolone Laurate powder (26490-31-3) Dosage
For Men: Nandrolone laurate powder haibvumirwi kushandiswa nevanhu. Kunyora mazano hazviwanikwi. Kana yakashandiswa nokuda kwepanyama-kana kuti kushanda-kukurudzira, chirwere che 200-400 mg chakapiwa mazuva ose e7-10, anowanikwa mumiganhu 8 kumavhiki e12 murefu. Iyi yepamusoro yakakwana kune vashandi vakawanda kuti vaone kugoverwa kunogona kuwanikwa mumasimba musimba uye simba, iyo inofanira kuendeswa nechepasi yeestrogenic uye androgenic basa. Nhamba yepamusoro (450-600 mg imwe neimwe ye 7-10 mazuva) ichapa simba yakakura yevanabolic, asi inogona kuoma kugoverwa kusungurudzika kwakanyanya iyi steroid inowanzowanika. Pane kudaro, vakawanda vanosarudza kubatanidza mujenya uyu nevamwe vanabolic / androgenic steroids . Zvichigoverwa zvayo, zvinoratidzika zvakakodzererwa zvakanaka zvose zvinokonzera kubvisa nekucheka, uye zvinogona kushandura Deca-Durabolin mumagetsi.
Kune Vakadzi: Nandrolone laurate powder haibvumirwi kushandiswa nevanhu. Kunyora mazano hazviwanikwi. Kana yakashandiswa nokuda kwehupenyu-kana kuti kushanda-kukurudzira, chirwere che 100 mg zuva rimwe nerimwe re 10-14 rakawanda, rakatorwa ku4 kumavhiki e6. Kunyange zvazvo zvishoma nezvishoma uyerogenic, vakadzi vanowanzotarisana nezviratidzo zve virilization pavanotora ichi chikamu. Izvozvo zvingaita kuti kuve nemigumisiro yemigumisiro kunetseka, mushonga unofanirwa kubviswa pakarepo kuti ubatsire kudzivirira kuonekwa kwavo.
Raw Nandrolone Laurate powder (26490-31-3) Benefits
Nandrolone laurate powder ine yakasimba anabolic action ne less andgenic properties uye yakanyatsogadzirirwa kukurudzira Protein Synthesis pasina kubudiswa kwezvinhu zvisingadi (kurutivi). Iyi proteiniti yemagetsi inobvumira kudzivirira mapuroteni kurasikirwa kuburikidza neUrea uye kunokurudzira mavara ane mavara. Mune mhuka chigadzirwa ichi chakashandiswawo kugadzirisa kukanganisa kwemagetsi, kushaya zvokudya zvinovaka muviri, anemia uye kunonoka kwekusimwa.Athletes inowanzojaira ichi chemishonga pavhiki nevhiki. Kuva nandrolone, Nandrolone laurate powder icharatidza zvinokonzerwa nevanabolic nehutachiona uye androgenic side effect.
Tenga Nandrolone laurate powder kubva kuBuasas.com
Raw Mestanolone powder (521-11-9)
Raw Trestolone Acetate (MENT) powder (6157-87-5)